Izithombo ze-pepper ezikhulayo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izithombo ze-pepper ezikhulayo
Izimfihlo zokutshala ngokuphumelelayo kwe-pepper ensizeni efasiteleni
Ama-bonsa-like bushs, amahle futhi ama-pods amahle emibala engavamile nemibala, yilokho okupeleta okubukeka sengathi kufakwe efasiteleni. I-genus ehlanganisa yonke i-pepper ibizwa ngokuthi i-capsicum, ngenxa yalokho okuqukethwe kwe-substance capsacin, enikeza izithelo kanye nembewu ibe mnandi othakazelisayo. Lezi zithelo zingasetshenziswa njenge-seasoning, zenze izimboni zokwelapha.
Pepper isiBulgaria: kanjani ukukhulisa izithombo quality
I-Pepper noma i-Paprika, eyilungu lomndeni waseSolanaceae, owaziwa ngokuthi yi-pepper elimnandi. Naphezu kwegama, le mifino ayihlangene nopele omnyama omnyama. Imifino yePepper iyisiko elinamandla kakhulu, elibhekwa njengendawo yokuzalwa yaseMelika. Lemifino ithanda umswakama nokushisa, kodwa lezi zithiyo azivimbeli abalimi basekhaya ekutshaleni izitshalo eziningana zezinhlayiya ezinhlobonhlobo zezithombo zokugcina nezithombo zokugcina.
Indlela yokutshala nokutshala iphelipele
Isilili esibomvu yisitshalo esihlaba umxhwele esivela emahlathini aseMelika. Akuwona wonke umuntu ongajabulela isidlo lapho lesi siko semifino sengezwa khona ekuhlungeni okuphezulu. Kodwa i-chili inesithakazelo kubalimi abafuna ukwazi okwengeziwe ngokulima kwayo.
Zingaki ngonyaka futhi i-phalaenopsis orchid iqhakaze kangakanani ekhaya? Kuthiwani uma kungekho amaqabunga amade?
Ingadi yesitayela seMoorish: umlingo wezimoto ezingamaMuslim ekwakhiweni kwendawo
I-mushinapin mushroom: isithombe nencazelo
Indlela yokutshala i-mandarin nokumnakekela ekhaya
Abasizi basekhaya abangabalulekile abathandi bezolimo - zenzele izithombo zokugcina ezincane zekhaya